Hurumende inoti musika wekutengesa mari wakaparurwa neReserve Bank of Zimbabwe musi wa 23 Chikumi uri kushanda zvakanaka zvekuti dhora renyika rave kusimba uye mitengo yezvinhu ichidzikira.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti hurumende iri kuita gudziramukanwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga VaGilbert Mupinda vanove nhengo yeZanu-PF vanoti zviri pachena kuti musika wekutengeserana mari wakaparurwa neRBZ uchiitwa chipiri choga choga uri kushanda zvakanaka.
VaMuponda vanoti RBZ inofanira kuita musika uyu zuva roga roga uye kukurudzira vanhu kuti vaendese mari kumabhanga kwete kuiendesa pamukoto.
Mutungamiri wesangano revashandirwi Doctor Israel Murefu vanoti mari iri kupihwa vemabhizimisi ichiri ishoma zvinopa kuti vamwe vagume vatsvaga pamusika wemukoto. Asi vati RBZ ikasadhinda mari yakawandisa yemunyika zvichabatsirawo.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi Doctor Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti musika uyu wabatsira sezvo hurumende isisatare mari inofanira kutengwa dhora rekuAmerica. Vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa sezvakamboitwa kare musika uyu unoondomoka zvekare.
RBZ inoti pamwedzi, nyika inoda mari inosvika mamiriyoni zana emadhora kana kuti US$100, asi mari inenge iri pamusika uyu kazhinhi inenge isingadarike mamiriyoni makumi masere kana kuti US$80.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology Muzvinafundo Gift Mugano vanoti hapana zviri kubuda kumusika uyu vachiti mari chaiyo inodiwa nenyika pamwedzi inosvika zviuru mamiriyono mazana mashanu pamwedzi kana kuti US$500 million.
VaMugano vati panenge pane chikiribidi chiri kuitwa kumusika uyu sezvo dhora remuZimbabwe riri kunzi rave nesimba asi munyika musina mari yacho yekuAmerica.
Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzose dzataura neStudio 7 dzinoti chinoda kuitwa nenyika kusimudzira mabasa ehupfumi kuti nyika igadzire zvakawanda zvekutengesa kunze kwenyika.